eg - Synonyms of eg | Antonyms of eg | Definition of eg | Example of eg | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for eg
Top 30 analogous words or synonyms for eg
Evil Geniuses Evil Geniuses (EG) အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့ အခြေစိုက် eSports အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Alexander Garfield သည် ၁၉၉၉ EG အသင်းကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ အဖွဲ့အစည်းအတွင်းရှိ ကစားသမားများသည် အမျိုးမျိုးသော တိုက်ခိုက်ရသောဂိမ်းများဖြစ်သော "Dota 2", "League of Legends", "StarCraft II", "World of Warcraft" နှင့် "Halo" စသည်တို့ကို ကစားသည်။
Evil Geniuses EG သည် Kurtis "Aui 2000" Ling ကစားသမားကို C9 အသင်းမှ ၂၀၁၄ ဒီဇင်ဘာတွင် ခေါ်ယူခဲ့သည်။
Evil Geniuses EG သည် "StarCraft II" ဂိမ်းနယ်ပယ်ထဲသို့ ဂိမ်းစတင် ဖြန့်ချီချိန် ၂၀၁၀ တွင် ထိပ်တန်း အမေရိကန်သမား Gregory "IdrA" Fields (commentator ဟုလူသိများ၏) နှင့် Nick "Tasteless" Plott နှင့်အတူ စက်တင်ဘာ ၉ ရက်နေ့တွင် ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။
Suma1L ၂၀၁၅ တွင် EG သည် Dota2Asian Championships ပွဲစဉ်ကို ရှန်ဟိုင်းတွင် အနိုင်ရခဲ့သည်။ ဂင်းနက် ကမ္ဘာ့စံချိန်မှတ်တမ်းစာအုပ်အရ Sumail သည် အသက်အငယ်ဆုံး ဂိမ်မာဖြစ်ပြီး ပြိုင်ပွဲဆုကြေးငွေ ဒေါ်လာ တစ်သန်းပိုင်ရှင်လည်း ဖြစ်သည်။
Evil Geniuses Evil Geniuses "Defense of the Ancients" (Dota) ကို eMG မှအသင်းသားများကို လွဲပြောင်းရရှိပြီး ဧပြီလ ၁၂၊ ၂၀၀၈ တွင် ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ EG အသင်းသည် "StarCraft: Brood War" ဂိမ်းအသင်းကို World Cyber Games မှ USA ချန်ပီယံဖြစ်သော Geoff "iNcontroL" Robinson, and Dan "Nyoken" Eidson, along with Eric "G5" Rothmuller, Jake "LzGaMeR" Winstead, and Bryce "Machine" Bates အသင်းသားများနှင့်အတူ ဧပြီလ ၂၅၊ ၂၀၀၉ ခုနှစ်ကတည်းကရှိခဲ့သည်။
Suma1L Syed Sumail Hassan (ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃၊ ၁၉၉၉ တွင်မွေးဖွား) (حسن سمائل سید) သည် Suma1L ဟူသော ဂိမ်းနာမည်ဖြင့် လူသိများပြီး ပါကစ္စတန်နွယ်ဖွား အမေရိကန် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဒိုတာ ၂ ကစားသမားဖြစ်ပြီး Evil Geniuses တွင်ကစားသည်။ Suma1L သည် EG အသင်းဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး The International 2015 တွင် Clinton "Fear" Loomis, Kurtis "AUI_2000" Ling နှင့် Peter "ppd" Dager တို့နှင့်အတူ ယှဉ်တွဲကစားခဲ့ပြီး အနိုင်ရခဲ့သည်။ သူ၏ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းမှာ အသက်အရွယ်နှင့်ပင်မလိုက်ပေ။
Post-rock အင်္ဂလိပ်တီးဝိုင်းများဖြစ်သော Stereolab, Laika, Dixo Inferno, Moonshake, Seefeel, Bark Psychosis နှင့် Pram တို့သည် post-rock ကို ရေးဆွဲ၍ jazz နှင့် Kraoutrock တို့လွှမ်းမိုးစေခဲ့သည်။ ၁၉၉၄ တွင် electronica ကို ရောစပ်စေခဲ့သည်။ Cul deSac, Tortoise, Labradford, Bowery Electric နှင့် Stars of the Lid တို့သည် American post-rock လှုပ်ရှားမှုတွင် founder များဖြစ်လာခဲ့သည်။ The Second Tortoise LP Millions Now Living Will Never Die album သည် post-rock တီးဝိုင်းဖြစ်လာသည်။ တီးဝိုင်းအများစုဖြစ်သော(eg. Do Make Say Think) တို့သည် Tortoise –sound ဖြင့်ဂီတကို စတင်၍ မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့သည်။
Symphonic black metal Symphonic black metal သည် black metal ၏ပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး symphonic နှင့် orchestral အစိတ်အပိုင်းများဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားသည်။ music workstation keyboard များပါဝင်သည်။ (ဥပမာ - strings, choir, piano, organများ နှင့် pad များ) woodwind, brass, percussion, keyboard များနှင့် string များအစရှိသော တူရိယာမျိုးစုံများ ပါဝင်သည်။ Carach Angren တီးဝိုင်းသည် တယော(သို့) live orchestral arrangement များကဲ့သို့ solo instrument များဖြင့် ထူးခြားသည်။ vocal များမှာ ရှင်းလင်းပြီးတော့ ပြဇတ်ကဲ့သို့ ပုံစံများဖြစ်ပြီး သီချင်းတည်ဆောက်ပုံမှာ symphonicများဖြင့် လှုံဆော်ထားသည်။သို့သော်လည်း အနောက်တိုင်းဂီတတွင် စွဲမြဲမနေပေ။ (eg. Sonata, rondo) လက္ခဏာများမှာ စူးရှသော အသံများ၊ မြန်သောtempo များနှင့် မြင့်သော အသံများ။ tremolo pick electric guitar တို့ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ခရစ်ယာန်ဘာသာ တောင်ငူဘုရင် နတ်သျှင်နောင်ကို ဖမ်းဆီး၊ သံလျင်ကိုခေါ်သွားပြီး နောက်ပိုင်း နတ်လျှင်နောင်သည် ပထမဆုံး ထင်ရှားသူ မြန်မာ ကက်သလစ်ခရစ်ယာန် ဖြစ်လာသည်။ မြန်မာ သက္ကရာဇ် ၉၇၅၊ (အေဒီ-၁၆၁၅) တွင် အင်းဝဘုရင် မဟာဓမ္မရာဇာ (ခေါ်) အနောက်ဖက်လွန်မင်းက သံလျင်ကို စုံဆင်းပြီး ဝန်းရံ တိုက်ခိုက် အောင်နိုင်ပြီး၊ နတ်သျှင်နောင်နဲ့ ဒီဘရစ်တို့ကို ကွပ်မျက်ခဲ့သည်။ ပေါ်တူဂီ စစ်သုံ့ပန်း (၄၀၀၀) ကျော်ကို ဖမ်းဆီးပြီး ချင်းတွင်းမြစ်နှင့် မူးမြစ်ကြား တဝိုက်ရှိ ရွာများတွင် မိမိတို့ ဘာသာကို လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ပြီး အခြေချ နေထိုင်ခဲ့စေကြောင်း၊ ၁၉၂၉ ခုနှစ် ထုတ် EG. Harvey ရဲ့ Outline of Burmes History ဆရာကြီး ဦးဘသန်းရဲ့ ကျောင်းသုံး မြန်မာရာဇဝင်နှင့် ၁၉၄၁ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလထုတ် The Voice Catholic magzine တို့တွင် ဖော်ပြထားသည်။
Nu metal ၁၉၉၇ တွင် nu metal သည် စတင်၍ လူကြိုက်များခဲ့သည်။ ၁၉၉၈ တွင် ယေဘုယျအားဖြင့် mainstream သို့စံချိန်ချိုးခဲ့သည်ဟု လက်ခံအသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။ ၁၉၉၀ နောက်ပိုင်းတွင် အချို့တီးဝိုင်းများသည် nu metal ကို အခြားအမျိုးအစားများနှင့် ပူးပေါင်းထားသည်။ (eg. industrial metal) ၂၀၀၂ ထဲတွင် ဝေဖန်ရေးသမားများက nu metal သည် mainstream တွင် လူကြိုက်များမှု ကျဆင်းလာခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ သို့သော် တစ်ချို့တီးဝိုင်းများသည် စီးပွားရေးအရ အောင်မြင်မှုရှိဆဲ ဖြစ်သည်။ ၂၀၀၀ အလယ်အားဖြင့် metalcore သည် New Wave of American Heavy Metal အထဲတွင် လူကြိုက်အများဆုံးအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤကာလအတွင်းတွင် nu metal တီးဝိုင်းများသည် အခြားအမျိုးအစားများနှင့် အသံများကို စမ်းသပ်လေ့လာခဲ့သည်။ ၂၀၁၀ တွင် ရေဒီယို အသံလွင့်ခြင်းနှင့် mainstream တွင် လူကြိုက်များမှု နည်းသော်လည်း nu metal တီးဝိုင်းတစ်ချို့တွင် အရေးပါသော အောင်မြင်မှုများရှိဆဲဖြစ်ခဲ့သည်။